कथा- जुना क्रमश: ८ – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
८. बुढा जिम्माल भक्तिरामको काजक्रिया सकिसकेपछि सबै भाइले बरखी बार्ने भएकाले सेतो बस्त्र सेतो कमेज सेतो सुरुवाल धोती टाउकोमा सेतो कपडाको फेटा लगाए । काज क्रिया सकेपछि भाइहरु आफ्ना आफ्ना घरमा गए । चक्रपाणि कान्छा भाइ थिए । जब चक्रपाणिकि जेठी पत्नी बितेसकेपछी, घरमा आमानभएका टुहुरा नाती र आफुसमेतलाई सारो गारो परेकाले छुट्टीएको छोरो गोपीकृष्णलाइ बुढा भक्तिरामले सगोलमा मिसाएका थिए । अब भक्तिराम जिउदो नभएपछि, संगै बसेका दाजु गोपीकृष्ण पनी आफु छुट्टीदा कै घरमा जाने निर्णय गरे । बुढा जिम्मालको मृत्युसंगै चक्रपाणि एक्लो भए । छोराहरुलाई पढाउन बनारस पठाएका थिए । बुहारिहरुलाई घरमा ल्याइसकेको थिएन । छोरा नआइकन आफै बुहारी लिन जान पनी भएन । एक्लो भएपछी चक्रपाणि आफुले ससुरालमा छोडेकी जुनालाइ लिन ससुराल कुदे ।
सम्साँझ चक्रपाणि टुप्लुक्क ससुराल पुगे । जुनालाई बिहे गरेर छोडेको पांच बर्ष बितिसकेको थियो । हर्लक्क बढेकी जुना चौध पन्द्र बर्षकी भएपनि अठार बर्षकि जस्ती देखिन्थिन । गोरो सरिर मिलेको अनुहार दांत त्यस्तै बान्की परेका अन्त्यन्त राम्री देखिएकी थिइन् । मामला बुढाले ज्वाई छोरीलाई लिन आए भन्ने कुरा बुझी हाले । ज्वाईको सेवा सत्कार गरेर भित्र लगे । सबै घर गृहस्तिका कुरा बेलिबिस्तार लगाएर कुराकानी एकापसमा गरे ।
चक्रपाणि आफुलाई लिन आए भन्ने थाहा पाएर जुना कोठाबाट बाहिर निस्कनै मानिनन । लाजले भुतुक्कै भइन । अब अलिअलि बिहे भनेको बुझ्ने हुन् थालिकी थिइन् । अब सबै साथीहरुको दौतरी मिलेको थियो तर आफ्नो भने उमेर नमिल्ने उनलाई लोग्ने पनि बाउ जस्तो लाग्थ्यो । जे भए पनि जुना जसरी पनि घरमा जानु पर्थ्यो । अरु उपाए पनि थिएन । घर पठाउनको लागी कोशेली पाहुरको बन्दोबस्त गर्नको लागि ढिकी जाँतो हुन् थाल्यो । मामला बुढाका घरमा
सेल, अर्सा, फिनि ठिकसे रोटि पाक्न थाल्यो ।
जुनालाइ लिन जुनाका दुलाहा आका छन् बाइ, भन्दै जुनाका संगसाथी भेटन आए । संग साथीले जुना त पिर नगर के कहाँ बुढो हुन् र ! अलि पाको मात्रै त हो नी भन्दै जिस्काए, जुनालाई माइती घर सदाको लागि छोडेर जाने कुराले पिरोली रहेको थियो । जुना रातभरी आफ्नी आमासँग अब के गर्ने भन्दै रुदै बिताइन । आमाले के भन्न सक्थिन र ! छोरीको कर्म लिएर आए पछि अरुको घर नगई कहाँ सुख पाइदो रहेछ भन्दै छोरीलाई सम्झाउन थालिन “ जुना छोरी मान्छेले नै अरुको घर स्वर्ग गराउने हो “ ज्वाई पाका मान्छे हुन् । अफ्ठ्यारो परेको छ । तिमीलाई माया गरेर राख्ने छन् । हामीले सौता माथि दिएका होइनौ । स्वास्नी मरेर घर समाल्न बिहे गरेका हुन् उनले । गलत वा सहि जे भएपनि तिम्रो बिहे यिनै संग भयो । जे भए पनि जिम्माल्को खलक हो । खान लाउन पक्कै दुख नहोला ।
जुनाको त्यो कलिलो मश्तिस्क के पो सोच्न सक्थ्यो र ! गाउका छोरा मान्छेले पढने स्कुल त थिएन अझ छोरी मान्छेलाई कसले पढाउने ? छोरी मान्छेले संस्कृत पढन हुन्न भन्थे । कता कति बाहुनका छोराहरुले भने गुरु कहा गएर कर्मकान्ठी संस्कृत पढथे । सो भन्दा तलका जातले पढने न ठाउ थ्यो । न त आश्रम पठाउन अनुमति नै पाउथे न त नै सक्थे नै ? जुनाले घरमै दाजुले पढेको सुनेर चण्डिका केहि श्लोकहरु कण्ठ पारेकी थिइन् । लेख्न जान्ने त कुरै थिएन ।
भोलि बिहानै मामला बाजेले एक जना भरिया खोजे, पाहुर बोक्नलाई, ज्वाइलाइ भात भान्छा गराएर छोरीलाई अगाडी लगाएर बिदा गर्न गाउको छेउसम्म पुगे । जुनाका साथीहरु पनी संगसंगै गाउको पुछार सम्म पुगे । जुना आफ्नो बा आमाको घर छोडेर जादा आशु थामिएको थिएन । डाको छोडेर आफु मात्रै रोइनन, गाउका सबैलाई रुवाएर गइन । सबै फर्के, चक्रपाणि, जुना अनि भरिया तीनजना गाउबाट ओरालो झरेर बडियार खोलाको तिरमा पुगे ।
जुनाको सुक्क सुक्क अझै रोकिएको थिएन । चक्रपाणिले जुनालाई म छु तिमीलाई दुख हुन मैले दिन्न । न रोउ काँधमा थपपथपाउदा आफ्नै बाउले भनेको जस्तो लाग्थ्यो, जुनालाई । नचिनेको मान्छे पनि होइन चक्रपाणि खुमा दिदिको देवर हुन, त्यसै पनि भिनाजु नाता थियो पहिले देखि । सम्साझ चक्रपाणिले जुनालाई लिएर घरमा पुगे । जुनाकै हातले दैलो खोल्न लगाए । रात परिसकेको थियो । चक्रपाणिले आफुले बरखी बारेको हुनाले आफै भान्सा तयार गरे । भरियालाई खान दिएर पिढीमा सुत्न लगाए । दुवै जना खानाखाईवरी सुत्न गए । जुना केही बोल्न सकिनन, बिभिन्न आशंका मनभरी उब्जिरह्यो । नत रातभरी निदाउन सकिन । आँखा झिमिक्क नगरिकन रात बित्यो ।
Mar 16, 2022 Pundary Aryal
कहिल्यै नफाट्ने पुस्तक “कलेजो फेरेको मान्छे” - 5,397 views